संशोधन सूची - कि वंशावली अनुसन्धान सञ्चालन मदत उत्कृष्ट पांडुलिपि स्रोतहरू एक आज छ। साथै मास्को Taganka थियेटर को एक महान अमरीकी रूपमा।
संशोधन सूची के हो?
पोल कर को जनसंख्या - यी अर्डर खातामा जो बाहिर एउटा लक्ष्य थियो जो अडिट, लगे, रूसी साम्राज्य मानिसहरूको संख्या लिन आवश्यक थिए कागजातहरू छन्। यस्तो कागजातहरू 18-19 शताब्दीयौंदेखि प्रयोगको थिए। संशोधन सूची - प्रत्येक प्रान्त को जनसंख्या सूची, नाम र थर, सबै बासिन्दा को उमेर संकेत। संशोधन - यो नै हो जनगणना। ग्रामीण क्षेत्रमा, संशोधन सूची गाउँमा र सहर र शहर को प्राचीन, यो नगर परिषद प्रतिनिधिको गरेको थियो थिए। यस्तो कागजातहरू 10 audits बाहिर थिए अस्तित्व समयमा कुल। पुरुष र महिला - संशोधन सूची sexes दुवै प्रविष्टि गर्नुभएको छ। तर सारांश टेबल मात्र मानिसहरू समावेश मा, महिला त्यहाँ फिट छैन। उदाहरणका लागि, संशोधन गर्ने ओरेनबर्ग प्रान्त तपाईंलाई थाहा मान्छे को प्रकारको 1919 साल 1834 देखि यस क्षेत्रमा बस्ने के गरौं सूची। त्यहाँ वर्ग कति महिला, पुरुष, छोराछोरी र वृद्ध थिए, बाँचिरहेको थुप्रै घरपरिवारमा थिए। ओरेनबर्ग प्रान्त को संशोधन सूची अब राज्य संग्रह मा राखिन्छ।
संकलित जानकारी को फारम तीन पटक परिवर्तन भयो। दिइएको कागजात गरिएका व्यक्ति, दर्ता पुरुषहरु प्राण termed। यी कागजातहरू अब पनि हामीलाई के स्थानहरू वा त्यो क्षेत्र हो थाहा अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, संशोधन यो Olemenevo, Akselmeevo, Novosyolky, Yining Sloboda जस्ता गाउँमा बनेको छ तामबोभ प्रान्त राज्य सूची; Zhdanov, Nikolaevka, वन फूल र यति मा को गाउँमा।
र यहाँ एन वी Gogol?
सबैलाई "मृत प्राण" भनिन्छ Nikolai टुक्रा मा छ थाह छ। त्यसैले, यो माथि उल्लेख गरिएका छन् जो यस्तो audits, समयमा भयो कि लेखक को कल्पना र वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य मा आधारित छ। स्पष्ट भएको जनगणना थिए बीच। त्यो गर्न थप audits पूरा गर्न, भन्न छ। तिनीहरू सबै प्राण, अघिल्लो जनगणना मा परी कथा मा प्रवेश को अस्तित्व स्थापित गर्न बनाइएका थिए। एक व्यक्ति अनुपस्थित (मरे, र यति मा) कुनै पनि कारण लागि भने, डाटा रेकर्ड गरिएको छ।
को नियम अनुसार, दर्ता पुरुषहरु Tales स्पष्ट पछि को जनगणना पर्छ। बेपत्ता प्राण अर्को संशोधन नभएसम्म उपलब्ध व्यक्ति मृत्यु भएको छ भने पनि छलफल भएको थियो। तसर्थ, राज्य प्रति व्यक्ति कर संकलन वृद्धि। तर बेईमान यो आफ्नै उद्देश्यको लागि नियम को प्रयोगको लागि उत्कृष्ट अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यस्तो दुरुपयोग को तथ्य छ र Nikolaya Vasilevicha Gogolya "मृत प्राण" को काम प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
को Taganka थिएटर मा "Revizskaya कथा"
"संशोधन सूची" - उहाँले आफ्नो जीवन को अन्तिम दिन र जहाँ उहाँले मुख्य निर्देशक-निर्माता थियो सम्म नेतृत्व जो Taganka थियेटर, मा 20 औं शताब्दीको यूरी Lyubimov को 70s मा मंचन गरिएको प्ले। प्ले लागि संगीत यसलाई भनिन्छ "Gogol सुइट", संगीतकार अल्फ्रेड Schnittke द्वारा लेखिएको थियो। को Taganka थिएटर मा "Revizskaya कथा" लक्ष्य लिएको छ - आफ्नो प्राण को नाटक देखाउन दर्शक Nikolaya Vasilevicha Gogolya को भित्री संसार प्रकट गर्न। प्ले मा मुख्य ध्यान प्लास्टिक समाधान गरिएको छ। रूस ":" मृत प्राण "को उत्पादन को प्रदर्शन को शब्दमा! के तपाईं प्ले एउटा प्रश्न सोधे जसले एन वी Gogolya को भाग्य, को मुख्य उद्देश्य खण्डन मा, मलाई देखि चाहनुहुन्छ? .. अनि किन कि तपाईंलाई छ सबै, मलाई आशा आँखा को पूर्ण सम्पर्क? "यसरी यो हाम्रो देशमा "एक लेखक, हुन" हो।
चरणबद्ध "Revizskaya कथा" Nikolai Vasilievich विभिन्न कामहरू देखि अंशहरूको समावेश - एक madman, "निरीक्षक जनरल", "सर्जक Confession" "पोर्ट्रेट", "नाक", र पनि ती Gogol गरेको पदहरू एक "मृत प्राण", "द ओभरकोट," "डायरी जो चरण देखि बोली कहिल्यै थियो। "सबै लेखक" आफ्नो संपूर्णता मा प्ले प्ले मात्र गर्नुपर्छ तर पनि - प्रदर्शन नै अर्थमा विषय हो जो चरण expressiveness सबै हालतमा, प्रयोग गर्दै मा, अभिनेता प्ले को एक विशेष शैली, उत्पादन को VE Meyerhold मुख्य विचार पूरा भनेर प्रयोग गर्नुहोस्। यसको आफ्नै तरिकामा Taganka थिएटर दर्शक "मृत प्राण" को कथा प्रस्तुत। "Revizskaya कथा" - जो तिनीहरूले सामाजिक अर्थ को acuteness प्रतिक्रिया कि दर्शकहरु आवश्यक यस्तो कथन छ। भन्दा यस्तै स्मारक मा देखाइएको प्रदर्शन तथ्याङ्कले निहित घेरिएको NV थियो कि deathly stillness को छवि प्रतिबिम्बित Gogol जीवन। अब Taganka थियेटर को मुग्ध पार्ने संगीतको देखि "Revizskaya कथा" को उत्पादन उत्पन्न गरिएको हो।
प्ले लागि संगीत
"उदात्त को झडप र आफ्नो लेखोटहरूमा अपवित्र, banal प्रयोग - यो सबै, पाठ्यक्रम, मलाई ठूलो हदसम्म प्रभावित। श्लागर - राम्रो कुनै पनि devilry, आत्मा मा प्राप्त गर्न एक तरिका मास्क "। त्यसैले म काम एन वी Gogolya संगीतकार अल्फ्रेड Schnittke कुरा छु। संयोगले "Revizskaya कथा" यस्तो हदसम्म संगीत भरिएको छ थियो। Nikolai धेरै सांगीतिक थियो। उहाँले यो कला फारम ठूलो महत्त्व संलग्न। लेखकले थाह सांगीतिक संकेतन। आफ्नो काम विषयहरू मा ओपेरा द्वारा बनाइयो। एक अभिन्न भाग, त्यो यो थिएटर मा कार्य को लागि आवश्यक ठाउँ र समय बनाएको छ को कारण, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ - संगीत जो एक बयान, - अल्फ्रेड Schnittke "Revizskaya कथा" को निर्माण।
संगीत मा कहानी
एक "दर्ता पुरुषहरु Tales" समयमा सुनिन्छ जो अल्फ्रेड Schnittke, द्वारा सुइट आठ भागहरु हुन्छन्:
प्ले को वर्ण
प्ले "Revizskaya कथा" को protagonist नै Nikolay Vasilevich Gogol भयो। अक्षरहरू बाँकी - लेखकले को वर्ण हो:
पावेल Ivanovich Chichikov।
Aksenty Ivanovich Poprishchin।
Andrei Petrovich Chertkov।
Akakiy Akakievich Bashmachkin।
स्पेनी Korol फर्डिनान्ड VIII।
बेनाम balletomane सरकारी, जसको शरीर को विभागीय तालिका परे छ, र प्राण - को थिएटर मा।
प्ले को सार
को Overture टाढा मृत्यु पछि, दर्शक हुर्किसकेका र बच्चाको टाउको मा विकसित गरेको छ कि रूपमा सानो हाँगा देखियो। त्यो एक टोपी लगाउँथे। टाउको त्यो ठूलो भोक संग खाए र बिस्तारै विशाल भयो, को चम्चा बाट खुवाउनुभयो porridge। त्यसपछि उहाँले यो बाहिर आए, श्री, मध्यम वा बरु छैन। यो Chichikov। दृश्य मा के भइ रहेको छ पृष्ठभूमि पैसा बचत र पैसा बचत गर्न सक्षम थियो जो केटा को शब्द, छन्। थप कार्य - कहानी देखि "पोर्ट्रेट" को एक अंश हो। यहाँ महिमा गुमाएका एक कलाकार छ। उहाँले यो निराशाजनक को, कला नयाँ काम योग्य सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हराउछ किनभने, त्यो दुनिया भर यो सबै बदला लिन लिन र सबै masterpieces नष्ट गर्ने इच्छा छ चल्छ। अब प्ले कहानी हस्तान्तरण गरिएको छ "द ओभरकोट।" एक जीवित महिला यो लुगा छैन, तर - - एक मित्र, मुख्य पात्र को धेरै रुचाउनु छ जो एक पत्नी, वस्त्र यस लेखमा अर्को incarnation प्राप्त छ। प्ले को अर्को भाग - कहानी को एक खण्ड "अधिकारीहरु।" एउटै खडा सेतो-कलर कार्यकर्ता र creaking पंख छन् तिनीहरू सबै नै, Nameless धेरै छन्, सबै। मानव प्राण अनन्त कमिला बस्ने घर एक प्रकारको, तिनीहरूलाई केही, सायद, लामो मृत देखि, बल दृश्य प्रतिस्थापित। चरण फेरि protagonist, यो आफ्नो वर्ण घेरिएको छ मा, तिनीहरूले उहाँलाई मुख बिगाराइ र यसलाई सामना निर्माण मा हाँस्न।
प्ले विचार को लेखक
Yuriy Petrovich Lyubimov - अभिनेता, निर्देशक, को Taganka थियेटर को कलात्मक निर्देशक र प्ले "Revizskaya कथा" को निर्माता - Yaroslavl मा सेप्टेम्बर 30, 1917 मा जन्म भएको थियो। 1922 मा, त्यो आफ्नो आमाबाबु, दाइ थियो र मास्को गर्न बहिनी सारियो। 1934 मा Lyubimov को मास्को कला थियेटर-2 मा स्कूल-स्टुडियो प्रवेश। 1936 मा उनले Vakhtangov थियेटर को विद्यालयमा दाखिल भएको थियो। स्नातक पछि, 1941 मा, Lyubimov उहाँले, गीत र नृत्य Ensemble सेवा सिपाहीहरूले को morale कायम गर्न संगठित जहाँ सेना, मा मस्यौदा तैयार थियो। युद्ध पछि, यूरी Lyubimov अभिनेता को Vakhtangov थिएटर मा काम गर्न गए। को थिएटर मा काम संग समानान्तर मा, त्यो चलचित्रमा तारा अङ्कित। 1959 मा, यूरी Petrovich एक निर्देशक रूपमा आफ्नो हात खोजे। यसलाई चरणबद्ध एक भागेका सफलता थियो, र उहाँले Taganka थिएटर मा टाउको को ठाउँमा निमन्त्रणा गरिएको थियो।
ठूलो अभिनेता को उत्पादन मा लगे गरिएको छ "Revizskaya परी कथा।" Gogol एन वी ably रूस Feliksom Antipovym को जनता कलाकार द्वारा प्ले थियो। कास्ट चलचित्रहरू मा आफ्नो भूमिकाको लागि सार्वजनिक गर्न ज्ञात अभिनेता, प्ले: इवान Bortnik, बिन्यामीन Smekhov, बोरिस Khmelnitsky, साथै अन्य ठूलो कलाकार।
रंग को रहस्य: रंग को बैजनी रंग कसरी प्राप्त गर्न
कसरी कागज र अन्य सतहहरु गर्न कागज देखि एक रेखाचित्र सार्न
हिन्दू धर्म को प्राचीन परम्परा। प्रेम र शारीरिक आवेग प्रतीकको रूपमा Kama भगवान
अन्तिम ढाँचा पछि: नतीजा-3 (समाप्त)
सुझाव र चाल: भिक्टोरिया शरद ऋतु कसरी ह्यान्डल गर्न